Ny Hetsipanoherana Politikan’ny “Samihafa Nefa Mitovy” Ao Sri Lanka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Septambra 2016 18:13 GMT
Hetsipanoherana “Samihafa Nefa Mitovy”
Ity lahatsoratra avy amin'i Raisa Wickrematunge ity dia niseho voalohany tao Groundviews, tranonkala fanaovan-gazetin'olom-pirenena nahazo loka tao Sri Lanka. Ny dika voasoratra etsy ambany dia navoaka ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Ny zoro Bauddhaloka mawatha akaikin'ny Arcade-n'ny Fahaleovantena dia somary nangina tamin'ny 4:30 hariva, afa-tsy vondron'olona vitsivitsy nitàna elo fotsy.
Izy ireo dia mpandray anjara tamin'ny ”Samihafa Nefa Mitovy,” fanentanana an-tserasera nikendrena mba hanaovana fiaretan-tory milamina hiarovana ny Sri Lanka iray misy fahamaroana, mivondrona manohitra ny fankahalana sy ny fizarazarana.
Rehefa nitombo moramora ny vahoaka, ireo mpandray anjara tamin'ilay fiaretan-tory nony farany dia nilahatra teny amin'ny lampivato, nitazona sorabaventy manambara fa ”Mitovy rà daholo isika rehetra” ary manameloka ny fanavakavaham-bolonkoditra.
#DifferentYetEqual 🙌🏼 I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word.
— Sangeeth Madhushan (@MetricAkash) Aogositra 15, 2016
#SamihafaNefaMitovy 🙌🏼 Mino aho fa ny marina tsy misy fitaovam-piadina ary ny fitiavana tsy misy fepetra no hanana ny teny farany.
Ilay hafatra voatsipika dia ho fanosehana manohitra ireo taratasy fametaka miavaka izay mandravaka ireo siklôposy sy fiara amin'izao fotoana izao manerana ny firenena—ny rehetra mitondra ny teny hoe ”Sinha-Le,” izay midika ”rà-n'ny liona” amin'ny Sinhala—milaza ny momba ny razambe liona izay eken'ny Bodista Sinhaley. Raha toa ka mbola tsy nisy herisetra mihitsy avy ao amin'ity vondrona ity, dia nofafazana loko niaraka tamin'ity filamatra ity ireo trano silamo, tamin'ity taona ity. (Jereo ny tatitry ny Global Voices.)
Satria ireo mpankafy-fiaretan-tory dia nanomboka niresaka momba ny antony nivondronany, nisy fanelingelenana tampoka nanaraka ny endrika isehan'ireo mpanohitra ireo mpanao hetsipanoherana izay nahitana moanina Bodista milaza ny tenany ho avy amin'ny hetsika Sinha Le. Niteny ireo moanina fa tsy manaiky ny fampiasana ny teny ”Sinha Le” izy ireo, izay lazainy ho tenin-dry “zareo”‘. Naverimberin'izy ireo nokiakiahana ny ”Ity dia firenena Bodista Sinhala”. Nitondra dika dison'ny sainam-pirenena Sri Lankey ihany koa ilay vondrona, indrindra tsy nahitàna ireo tsipitsipika manondro ny vitsy an-isa eo amin'ny firenena.
Ilay sainam-pirenena diso.
Ireo sasay mpandray anjara, ao anatin'izany i Azath Salley, lefitry ny Ben'ny tanànan'i Kolombo taloha, dia niezaka ny hifanandrina am-bava tamin'ireo mpanohitra ny mpanao hetsi-panoherana. Tsy ela ny toedraharaha dia nivadika ho fifanasàna vangy.
Izany dia milaza fa ny ankamaroan'ireo mpanohitra ny mpanao hetsi-panoherana dia nanangana ny vahoaka ao Sri Lanka sy ny fahatahorana hoe ny vahoaka Sinhala Bodista dia, amin'ny lafiny hafa vitsivitsy, lasa ”eo ambany fanapahan” ireo vondrom-piarahamonina vitsy an'isa. Nolavin'ireo hetsika manohitra ny hetsi-panoherana ny fangatahana fialàna, tamin'ny fitenenana hoe, ”Avelao ry zareo hiala any! Firenenay ity!”
Tsy firaikàn'ny Polisy
Rehefa nitranga ny korontana, tokony niditra an-tsehatra ny polisy. Na nisy polisy iray nijoro fotsiny aza dingana vitsy niala teo, nandamina ny fifamoivoizana, ny mpandray anjara tamin'ilay fiaretan-tory nanantona azy nivantana ary nangataka azy hiditra an-tsehatra. Na izany aza, toa sahiran-tsaina kokoa tamin'ny fitandronana ny filaminan'ny fifamoivoizana ilay polisy, ary toa tsy niraharaha ilay vondrona mpanohitra ny mpanao hetsi-panoherana izy.
Rehefa niteny ireo mpandray anjara tamin'ny fiaretan-tory hoe mitondra dika dison'ny sainam-pirenena ny saina entin'ilay vondrona ary nanontany raha io no tena sainam-pirenena, namaly ilay andianà Sinhal, ”Eny, jereo ny bokin-tantaranao.” Ny andininy faha-6 avy ao amin'ny Lalam-panorenan’i Sri Lanka, na izany aza, dia manamarika mazava tsara ny sainam-pirenena ho toy ” ny Saina Liona.”
Tamin'ny farany, niezaka ny hanamaivana ny fifandonana tamin'ny fangatahana ireo mpandray anjara mba hipetraka teo amin'ny sisin-dalàna ary hanajanonana ny fanakorontanana ny fifamoivoizana ilay polisy. Zavatra izay avy hatrany dia notanterahan'ireo mpandray anjara. Na izany aza, dia nanohy niezaka ny hanakorontana vahoaka ireo vondrona mpanohitra mpanao hetsi-panoherana —ary tamin'izany no nanosehan'ilay polisy ilay mpanohitra mpanao hetsi-panoherana iray hiala lavitry ny sehatra. Nijanona mandrapahatapitry ny alina ilay vondrona.
Nasongadin'ilay fiaretantory fa ny tsy fandriampahalemana tsapan'ireo Bodista Sinhala sasany dia mbola mitohy misisika foana, na eo aza ny zavamisy hoe izy ireo no mbola mijanona ho mponina maro indrindra ao amin'ny firenena. Toa tena nandaitra ny fanakorontanana, amin'ny ampahany: nifantoka tamin'ny fifandonana tamin'ireo mpanohitra ny mpanao hetsi-panoherana ny tatitra avy amin'ny haino aman-jery momba ilay fiaretan-tory, somary miteny kely momba ilay fiaretan-tory tenany. Ny filamatr'ireo mpanohitra ny mpanao hetsi-panoherana—tsy ny hafatry ny fiaretan-tory—no nanjaka tamin'ny fandrakofanm-baovao.
Tokony mba nivonona tsara kokoa hiatrika karazana korontana toy ireny ireo mpikarakara ny fiaretan-tory, indrindra fantatra fa nisy korontana iray nitovy tamin'io nitranga tamin'ny fiaretan-tory niaraka tamin'ny labozia teoivelan'ny Foiben'ny Kolontsaina Bodista ao Sambuddatva Jayantha Mawatha tamin'ny 2013 (fandrakofana mavesatra nataon’ny Groundviews).
Maro ireo mpandray anjara tamin'ilay fiaretan-tory no nirotsaka tamin'ny fifandirana am-bava, tezitra amin'ny kabary tsara lahatra mankahala vahiny nataon'ireo mpanohitra ny mpanao hetsi-panoherana. Io, raha ny fahitàna azy, no tena setry notadiavin'ilay vondrona, ahafahan'izy ireo hamafy ny vaovaom-pitantaràna sy hisarika ny mason'ny rehetra. (Ivelan'ny endrik'ireo taratasy fametaka miavaka ”Le”, ary koa ny fananganana antoko tahaka ny Sinhale Jathika Balamuluwa, ireo mpikatroka mafana fo tsy laitra akisoka ireo dia somary nangina hatramin'ity volana ity.)
Raha henjana tokoa ny zava-nitranga, dia nisy fotoana iray izay nihiran'ireo mpandray anjara ny hira ”Lowe Sema” mba hanaronana ireo filamatry ny fikambanan'ireo mpomba ny ankolafy Sinhale:
#differentyetequal participants attempting to drown counter voices with song #lka #SriLanka pic.twitter.com/X0yffzKIcW
— Groundviews (@groundviews) August 15, 2016
mpandray anjara amin'ny #Samihafanefamitovy nikatsaka ny hanarona ny feo amin'ny alalan'ny hira #lka #SriLanka
Voaporofo fa nahomby ny fihirana, raha nandritra ny fotoana fohy monja, ary ireo mpanohitra ny mpanao fihetsiketsehana dia niato vetivety tsy nihiaka ary nitsangana tampoka teo amin'ny manodidina, tsy nahafantatra izay tokony hataony.
Ireto ambany ireto misy rakipeo avy amin'ireo nanatrika ny fiaretan-tory, nanazava ny antony nahatongavany:
12 ora izayNepal